Xildhibaannada Baarlamaanka 11-aad oo la dhaariyay | KEYDMEDIA ENGLISH
Xildhibaannada Baarlamaanka 11-aad oo la dhaariyay
Muddo dheer oo muranno, is qab-qabsi iyo khilaafyo siyaasadeed oognaayeen, ugu danbeyn waxaa maanta la dhaariyay Xildhibaannada Baarlamaanka 11-aad, taas oo ka dhigan in waddanka ka baxay firaaqii hay’adaha dastuuriga.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xildhibaannada Baarlamaanka 11-aad ee JFS, ayaa ugu danbeyn la dhaariyay maanta, kadib doorasho muddo soo jiitameysay, taas oo xiisado iyo xasarado siyaasadeed oo kala duwan abuurtay.
Xildhibaannada laga soo doortay Koofur galbeed, inta badan saraakiisha NISA, ka soo galay Baarlamaanka iyo xubno kale, oo siyaabo kala duwan aan hore u qaadan shahaadad, ayaa maanta qaatay, waxayna ka qeyb galeen dhaarta.
Guddoomiyaha Maxakamadda Sare Garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed, ayaa dhaariyay Xildhibaannada labada Aqal ee Baarlamaanka, waxay kitaabka Qur’aanka gacanta ku saareen in ay dalka ugu adeegayan si daacad ah.
Ra’iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble, Madaxdii hore ee waddanka iyo wakiillada Beesha Caalamka, ayaa ku sugn madasha, waxaana ka maqan, Madaxweynihii hore Farmaajo, kaas oo aan raalli ahayn dhaarinta.
Dhaarinta Xildhibaannada, ayaa la micno ah, in waddanku yeeshay, hay’ad sharci dajin oo rasmi ah, xilli ay xusid mudan tahay, in waqtihii Baarlamaankii hore uu dhacay 27 December 2020, oo ay ka soo wareegtay hal sano iyo saddex bilood.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa aad loogu amaanay dadaalka uu ku bixiyay in waddanku ka baxo firaaqa siyaasiga ah, xilli Farmaajo iyo Kooxdiisu seynta uga taagnaayeen hor u socodka doorashooyinka.